Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » WTN weputara amụma ntuli aka UNWTO ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
A na-atụ anya na ndị nnọchi anya mba 113 ga-eme ntuli aka na Mgbakọ Mgbakọ UNWTO na-abịa na Madrid site na Nọvemba 30 ruo Disemba 3. eTurboNews ugbu a nwere amụma wepụtara nke World Tourism Network. A na-atụle mba ole ga-atụ vootu na ole megide nkwenyeghachi nke odeakwụkwọ ukwu n'isiokwu a.
Mgbakọ General Tourism Organisation (UNWTO) na-akwado ịmalite na Madrid site na Nọvemba 30 - Disemba 3.
Ihe kachasị atụ anya bụ votu nzuzo maka nkwenye nkwenye nke Zurab Pololikashvili maka okwu ọzọ.
Ma ndị odeakwụkwọ ukwu UNWTO gara aga na ọtụtụ ndị ndu ugbu a na ndị gara aga nke World Tourism na-agba ndị nnọchiteanya ume ịtụ vootu. OBU n'anụ nkwenye nzuzo.
E mere ka nke a pụta ìhè n'usoro akwụkwọ ozi mepere emepe nke ndị isi ndị bụbu ndị ọrụ UNWTO dere, nke ọma na mkpọsa ntuli aka nke ndị otu UNWTO. Network Njem Nleta Ụwa, na site na Costa Rica na-arịọ a votu nzuzo maka nkwenye nkwenye a.
Mkpebi a dị ugbu a n'aka ndị nnọchiteanya na-aga Nzukọ Mgbakọ n'izu na-abịa.
Dị ka amụma World Tourism Network nke ewepụtara ugbu a, nleba anya nkwuputa maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu guzoro dị ka nke a na Nọvemba 23.
A na-atụ anya na mba 7 ga-akwado Zurab na ntuli aka nzuzo
A na-atụ anya na mba 43 agaghị akwado Zurab na ntuli aka nzuzo
Mba 63 ka ekpebibeghị ka ha ga-esi votu na ntuli aka nzuzo
2/3 nke votu dị mkpa iji kwado.
Ọ bụrụ na enweghị nkwenye, ntuli aka ọhụrụ nwere ndị ọhụrụ ga-abịa. A kọwara usoro ahụ kpọmkwem eTurboNews ke ibuotikọ emi:
Ndị nnọchi anya debanyere aha ugbu a na Mgbakọ UNWTO na-abịa
Ọ bụrụ na ị bụ onye otu World Tourism Network, pịa ebe a maka a ndepụta nke ndị nnọchi anya UNWTO na Mgbakọ Mgbakọ na-abịa na Madrid 2021;